မြေးဦးလေး Shandra အတွက် စည်ဖြိုး မိဘနှစ်ပါးက ပထမဆုံး အမွေပေးလိုက်တဲ့ ရွှေထည်ပစ္စည်းတွေ…. – Cele Oscar
မြေးဦးလေး Shandra အတွက် စည်ဖြိုး မိဘနှစ်ပါးက ပထမဆုံး အမွေပေးလိုက်တဲ့ ရွှေထည်ပစ္စည်းတွေ….
ပရိသတျကွီး ရေ သရုပျဆောငျ စညျဖွိုး ရဲ့ မိခငျက ဒီမနကျ မှာ သူ့ရဲ့ မွေးမလေး ကို ရှထေညျ ပစ်စညျးလေးတှေ လကျဆငျ့ ကမျးပေးခဲ့ ပါတယျနျော။ ဒီပစ်စညျးတှဟော စညျဖွိုး သုံးနှဈသား တုနျးက ဝတျခဲ့တဲ့ ပစ်စညျးတှလေို့ လညျးသူမ ရဲ့ ဆိုရှယျ မီဒီယာတှငျ တငျထား ပါတယျနျော။
ဒီကလေး ဟာ မှေးက တညျးက ကံကောငျး ခွငျးတှေ ပိုငျဆိုငျ ထားသူ လေးပါနျော။ တဈဦး တညျးသော မွေးဦး လေးမို့လညျး တဈအိမျ လုံးက ဝိုငျးခဈြ နကွေတာပါနျော။ စညျဖွိုး ရဲ့ မိခငျဟာ သူ့မွေးမ လေး မမှေးခငျ ကတညျးက လြောလြော ရှူရှူ မှေးဖှားလာအောငျ အလှူတှေ မြားစှာ ပွုလုပျခဲ့ သူပါနျော။
သား နဲ့ ခြှေးမ အတှကျလညျး ကိုယျပိုငျ လုပျငနျး တဈခုကို ဦးစီး လုပျကိုငျ နိုငျရနျ တညျထောငျ ပေးခဲ့ ပါသေး တယျနျော။ကိုယျ့ကလေး တှကေို အရှယျရောကျတဲ့အထိ ခဈြခငျ ယုယ နတေဲ့ မိဘနှဈပါး ရဲ့ ကြေးဇူးတှေ ကတော့ ဆပျလို့ မကုနျ နိုငျအောငျ ပါပဲနျော။
ပရိသတ်ကြီး ရေ သရုပ်ဆောင် စည်ဖြိုး ရဲ့ မိခင်က ဒီမနက် မှာ သူ့ရဲ့ မြေးမလေး ကို ရွှေထည် ပစ္စည်းလေးတွေ လက်ဆင့် ကမ်းပေးခဲ့ ပါတယ်နော်။ ဒီပစ္စည်းတွေဟာ စည်ဖြိုး သုံးနှစ်သား တုန်းက ဝတ်ခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေလို့ လည်းသူမ ရဲ့ ဆိုရှယ် မီဒီယာတွင် တင်ထား ပါတယ်နော်။
ဒီကလေး ဟာ မွေးက တည်းက ကံကောင်း ခြင်းတွေ ပိုင်ဆိုင် ထားသူ လေးပါနော်။ တစ်ဦး တည်းသော မြေးဦး လေးမို့လည်း တစ်အိမ် လုံးက ဝိုင်းချစ် နေကြတာပါနော်။ စည်ဖြိုး ရဲ့ မိခင်ဟာ သူ့မြေးမ လေး မမွေးခင် ကတည်းက လျောလျော ရှူရှူ မွေးဖွားလာအောင် အလှူတွေ များစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ သူပါနော်။
သား နဲ့ ချွေးမ အတွက်လည်း ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း တစ်ခုကို ဦးစီး လုပ်ကိုင် နိုင်ရန် တည်ထောင် ပေးခဲ့ ပါသေး တယ်နော်။ကိုယ့်ကလေး တွေကို အရွယ်ရောက်တဲ့အထိ ချစ်ခင် ယုယ နေတဲ့ မိဘနှစ်ပါး ရဲ့ ကျေးဇူးတွေ ကတော့ ဆပ်လို့ မကုန် နိုင်အောင် ပါပဲနော်။
ပြည်သူတွေအားလုံး အဆင်မပြေတဲ့ကြားက လှူတဲ့အလှူငွေတွေမို့လို့ မသမာသူလူတစ်စုကို ဒူးထောက်တောင်းပန်လိုက်တဲ့ အိစိကွေး……